admin · Febroary 2016 · Global Voices teny Malagasy
admin · Febroary, 2016
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Febroary, 2016
Mankalaza Ny Faha 51 Taonan'ny Fahaleovantena i Gambia, Fa Tsy Ny Rehetra No Mankalaza
Afrika Mainty24 Febroary 2016
Nankalaza ny faha-51 taonan'ny fahaleovantenany avy tamin'ny Grande Bretagne i Gambia ny 18 Febroary 2016, maherin'ny 50 taona taorian'ny naha fanjakana faha-37manana ny fiandrianany ao Afrika azy.
Nianiana Ny Tsy Hiverina Intsony Ilay Kiobàna iray Nanova Taovam-pananahana Ho Vehivavy Nifonja Indray Mandeha Tany Kiobà,
Amerika Avaratra22 Febroary 2016
Tato ho ato, mora ny fivezivezen eo anelanelan'i Etazonia sy Kiobà, fa misy ireo Kiobàna sasany tsy manana tombontsoa amin'ny hiverenana any amin'ny tanindrazany.
Miparitaka Any Atsimon'i Venezoela Ireo Kilasy Fianarana Tsy Misy Mpampianatra
Amerika Latina21 Febroary 2016
Na tian'izy ireo aza ny asany, an-jatony ireo mpampianatra nametraka fialàna any Gran Sabana, Venezoela, niala ny toerana fampianarany mba hitady karama tsaratsara kokoa any amin'ireo indostria hafa.
Drafitr'i Hong Kong Mba Hamongorana Tsikelikely Ny Varotra Vangin'elefanta Amin'ny Tsena Anatiny
Azia Atsinanana17 Febroary 2016
Nanambara ny drafitra hametrahana fandraràna ny fanafàrana sy fanondrànana ny vokatry ny haza elefanta ireo manampahefana an'i Hong Kong, manafoana tsikelikely tanteraka ny varotra vangin'elefanta ao amin'ny tsena anatiny.
Afrika Mainty17 Febroary 2016
Gwen Rakotovao: ‘Manamafy Ny Fifandraisana Ara-tsosialy’ Amin'ny Alalan'ny Dihy Sy Ny Kanto
Niresaka tamin'i Gwen Rakotovao ny Global Voices, ilay vehivavy talen'ny kanto, lehiben'ny fitantanana, lasibika, ary mpanoratra boky ho an'ankizy, izay nentin'ny asany mahavalalalina nitety ny tontolo.
Fihetsika Maneho Hatsaram-panahy Roa Samy Hafa Mampiseho Ny Tsara Indrindran'ny Maha-Olona Any Pero
Amerika Latina14 Febroary 2016
"Misaotra, Brando, satria tamin'ny tsy fahafantarana, tsy hoe namerina kitapom-bola fotsiny ianao... fa namerina fanantenana tamin'ny firenena ihany koa!!"
Savaravina Ataon'ny Media Sosialy Karibeana Momba Ny Hatezerana Mafy Mitambolona Manodidina Ny Fihetsika Tampok'ilay Mpilalao Cricket Chris Gayle
Karaiba10 Febroary 2016
"Toa mihoatra ny tokony ho izy aza ny fanamelohana manerantany ny fanadalàn'i Chris Gayle [kanefa] fampahatsiahivana tsara ilay resabe mikasika iny zava-nitranga iny, milaza fa misy ny tsipika tokony tsy azo ihoarana."